RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka ee maanta – Beegsonews-Wararka maanta
Qaraxii ka dhacey adisababa ragii ka danbeyey oo la xukumey
Home WARARKA MAANTA RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka ee maanta
RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka ee maanta
Wararka naga soo gaarayo xarunta Baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegayo in kulankii maanta baaqaday. Maanta ayaa waxaa lagu waday in uu si rasmi ah u furmo Kal-fadhiga 5-aad ee Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya,kadib markii Arbacadii la soo dhaafay uu furay Madaxweyne Farmaajo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in kulankii Xildhibaanada oo Ajendihiisu ahaa in Warbixin looga dhageysto Guddiga dib u eegista Dastuurka uu u baaqday kooram la’aan,kadib markii Xildhibaanada ay soo xaadi waayeen kulankaasi.
Qaar ka mida Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ayaa iayagana ka horyimid Ajendaha furitaanka Kal-fadhiga 5-aa ee Golaha oo lagu waday in uu furmay, hayeeshee uu kooram la’aan u baaqday.
Mid ka mid Xildhibaanada ayaa u Sheegay MOL in RW Kheyre uu ka shaqeeyay in kulanka maanta aan la helin Kooram uu ku furmo. Kheyre ayaa ka baqayay in Arimaha Amniga laga hadlo oo xildhibanada qaar ka hor yimaadaan ajandahii horay loo dajiyay. Waxa uu yiri “xalay ayaan na loo sheegay in xildhibaanada Wasiirada ka ah xukumadiisa lagu wargaliyay in ayan imaanin kulanka maanta”.
xigasho muqdisho online
Madaxweyne Kenyatta ayaa kordhiyay bandoowga guud ahaan Kenya,